Global Voices teny Malagasy » Shina: Tovovavy iray avy ao Yunnan, niboridana ho fitakiana ny rariny · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Desambra 2020 2:15 GMT 1	 · Mpanoratra Jennifer Zhang Nandika (fr) i Samantha Deman, avylavitra
Sokajy: Shina, Fanoherana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Vonjy Voina
Tsy ela akory izay, lasa iray tamin'ireo lohahevitra nafàna teny anatin'ny aterineto shinoa ny tantaran “ilay tovovavy nitanjaka tao Yunnan”. Nanapaka hevitra ny tovovavy iray 21 taona, Peng Chunping, fa hametraka ety anaty aterineto ny sariny, mitanjaka, mba hisintonana ny saina sy hakàna ny fanohanan'ny fiarahamonina. Voadikan'ny bilaogy ESWN  [ho amin'ny fiteny anglisy] ny fanadihadiana manontolo natokan'ny gazety Southern Weekend ho an'ny lasan'ity tovovavy ity, ny tantaran'ny fitakiany sy izay nolalovany nandritra ny “fanoherany tamim-pitanjahana”.
Araka ny fitantaran'ny Southern Weekend, zazavavy kamboty i Peng, nohelohina ho faty tamin'ny taona 2000 noho ny vono olona ny rainy. Noho ny asa fitadiavana dia nandao ny tanànany ny reniny tamin'io taona io ihany. Tamin'ny 2003, mbola 15 taona izy tamin'izany, nanainga hikaroka ny reniny i Peng. Rehefa niverina izy taona roa taorian'izay, hitany fa nesorina tsy ho azy ny tranony sy ny karatra maha-mponina azy. Notazoniny ho tomponandraikitra amin'ny hirifiry ara-pianakaviana manjo azy ny governemanta eo an-toerana, ary dia natombony ny dia lavitra ezaky ny fitakiany.
Nanoratra bilaogy izy, niantso ireo mpampahalala vaovao goavana, nandeha nanatitra fanangonantsonia tany amin'ny governemantam-bohitra sy ny governemantam-paritra, ary farany tonga tany Beijing tamin'ny Jona 2008. Tany no nandrenesany ny tantaran'i Furong Jiejie na Soeur Lotus [angl] – ary ny fomba nahatonga azy io ho lasa nalaza taorian'ny namoahany sary tety anaty aterineto. Nanomboka teo, andiantsary telo ahitàna azy mitanjaka no napetrak'i Peng tety anaty tambajotra, izay nahasarika ny sain'ny media vitsivitsy. Mazava loatra fa tsy nanisy tsindrimpeo tamin'ny tsy rariny nanjo azy ireto farany. Nisy aza mpanao gazety vitsivitsy, mivantana na ankolaka, nanamarika hoe tsy mitombina ny tantarany momba ‘ny tsy rariny”. Nahatezitra azy izany ary dia nanatefotefoka ireto mpanao gazety izy. Ny fivoarana farany indrindra tamin'ilay raharaha dia ny fitantarana ny resaka firaisana ara-nofo nataony tamina mpanao gazety iray avy ao Yunnan, ity farany izay diso fanantenana tamin'ny fomba nitantarany ny tantarany nony farany.
Mahabe fisalasalàna ny maha-marina na tsia ny tantaran'i Peng. Ny sasantsasany amin'ireo fanehoankevitra navoaka tao amin'ny bilaoginy [amin'ny fiteny shinoa, toy ireo rohy rehetra manaraka] nilaza hoe :
Raha marina ilay tantara, mety tsy ho nisy ny fikatsahana fomba hahatafavoahana mampihomehy sy mahatsikaiky tahaka izao. Mety ho marina ny voalazanao, saingy manify loatra io ampaham-pahamarinana io.
Mpisera aterineto ao amin'ny NetEase no mametraka fanontaniana momba izay tiany hahatongavana:
Ny tena tanjon'i Peng Chunping, dia ny handrebireby (hisandoka) vahoaka… Mpampanofa vatana ao an-tanàna izy ary mitaky vola eny rehetra eny amin'ireo mpanjifa azy !
Na izany aza, misy ihany ireo sasantsasany manisy lanja ny tantaran'i Peng Chunping ka mandray azy ho matotra, ary dia milaza amintsika momba ny fiarahamonina hatrany ifotony ao Shina izany, indrindra fa momba ireo niangaran'ny vintana tsy mahazo tohana sôsialy omena ireo saranga ambany indrindra eny anivon'ny vahoaka. Manamarika ilay vehivavy bilaogera Yghren  [teny shinoa] fa na atao hoe manana olana ara-tsaina aza izy, tokony ho afaka manampy azy ny fiarahamonina :
Ndeha hataontsika hoe noforomporoniny daholo izao rehetra izao ary tena marary saina tokoa izy, tokony hitazana fotsiny ve isika, sy ny governemantantsika ary ny federasiôna misahana ny vehivavy eto amintsika, ka hitazana azy midaraboka any anaty hantsan'ny fanimbàna tena ?
Nanome tsodrano azy tamin'ny alàlan'ny fanehoankevitra iray napetrany tao amin'ny bilaoginy  [teny shinoa] i Liu Xu, mpisera aterineto avy ao Sichuan, izay nizaka ny vokatry ny horohorontany :
Miangavy anao aho, mahereza ary aza manaiky hofolahana, toy ny nataon'ireo olona tao Sichuan nandritra ny fandalovan'ny horohorontany tao Wenchuan. Mino ny fandresen'ny rariny izahay, toy ny inoanay ny fandresenao koa!
Nisongadina indray ny anjara toerana sy ny fitsipi-pitondrantenan'ireo haino-vaky-jery. Manontany tena  momba ny fandrakofana ataon'ny Southern Weekend an'ireo antony nahatonga ilay tovovavy hamoaka ny sariny mitanjaka ilay bilaogera 静夜思（Fisainan'ny Alina Tony) :
Inona no tena irian'ilay tovovavy? Ny hany valiny tokana dia ny hoe: ny fahalalahana miteny izay lalain'ireo mpanao gazety fatratra ary ny fitaomana entin'ireo media eny amin'ny fiarahamonina. Vantany namoaka voalohany ireo sariny mitanjaka i Peng, ary nanomboka ny tantaran “ilay tovovavy mitanjaka mikaroka ny reniny”, dia mazava be fa ny hanetsika ny fihetsehampo sy ny hisarika ny sain'ny olona maro araka izay tratra no notadiaviny ! Taona iray mahery aty aoriana, rehefa nivonona ny hanao firaisana tamin'ilay mpanao gazety i Peng, mety efa tàkany fa na mety hitondra laza ho azy aza ny resabe momba ireo sariny mitanjaka, hitondra azy ho aiza anefa izany? Tsy misy afa-tsy ny fanampiana avy amin'ireo mpanao gazety sy ny media no ananany vintana hampahafantatra amin'ny fiarahamonina ny tenany (sy mampahafantatra ny tsy rariny niaretan'ny fianakaviany), satria ananan'ireo mpanao gazety ny fahafahana mampiasa ny zo hiteny, zo izay tsy ananany, sady ihany koa tsy ho ananany velively ny fahafahana mitaona fiarahamonina toy ny an'ny gazety.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/12/15/150732/
 Voadikan'ny bilaogy ESWN: http://www.zonaeuropa.com/20090814_1.htm
 Furong Jiejie na Soeur Lotus : http://sisterfurongjiejie.blogspot.com/2005/10/sister-lotus.html
 Ny sasantsasany amin'ireo fanehoankevitra navoaka tao amin'ny bilaoginy : http://juiujiuwo.blog.163.com/blog/
 Mpisera aterineto ao amin'ny NetEase : http://juiujiuwo.blog.163.com/blog/static/9114436420097240510912/
 Manontany tena: http://www.infzm.com/content/32853/1